Ijaarsi mana barnootaa halleelamaa jira!
Gabaasa kana banaa dubbisaa.
Xalayaa iyyannaa gargaarsaa
Ijaarsi mana kitaaba Mana barumsa Aanaa Siraaro'o kana fakaata!
Projektiin biqiltuu dhabu'u, ganna kana madda Norway keessaa argameen biqiltuu muka bifa 17 woliigallat laakoobsi isa ka 20 000 oli ta'u gara guddaa Mana Barnoota Aanaa Siraaroo Sad,2faa keesatiif mana Barnoota Lokkee Kechaa keesat dhabsifneera.
hawooti'i leenjii kennu, hawootii 26 oli ta'an leenjii egumsa fa'yatiif nyaata madaalaa ogeesuma nannootiin gargaarmnee leenjifnee woraqaa ragaa kennineeraf! Maddi leenjii kanaaf argamellee hawootii hagoo ta'an Norway keesaayi! Mee as tuqaa laalaa!
Kitaaboota binnee qoduu.! Kitaaboota waajirri bulchiisa barnootaa dhiyeesuu hindandeenne kan akka dictioneroota, ddaaa ddaa bay'ini isaa 500 oli kata'u binnee maniin barnootaa Sanbatee, Lokkeetiif Siraroo Sad. 2faa qoonneera
Dargagoota dhiiraaf durbaa barsiisuu, Hennaa ammaa kana dargaggoota laakoobsi isaanii nanno 20 ta'an dhiiraaf durbaa kan barnootaaf fedhii guddaa qabaatanii maatiin hunna hinqabne filannee Mana Barnoota Adventistii Kuyeraatitti galchifnee barsiisaara. Ijoolleen sadarkaa kutaa gadaanaa ka'e haga degree barataaru. Haga ammaa namni 2 diploomaan akkasuma tokko degriin barana ebifamaaru. Akkasuma universisitiif collegoota dhuunfaa keesatis akkasuma maniin barnoota nannoo adda addaa keesatillee dargagoota haga ta'an akkuma hunna keennatiin cinaa dhaabbannee barsiisaarra.
Mee qunamtiiftuu tana banaa dubbisaa: Projektoota keenna!
Projetoota amma harkaa qabnu waan armaan jalaa kana fakaatu!
Projektii maniin barnootaa, (ijaarsa mana barumsaatiif meshaa barnootaa kan akka kitaabbanii)
Projektii barnoota dargaggootaa
Leenjii wa'e nyaata madaalaa, egumsa fayya'a waan biraallee akkuma barbaachiseen hawwootaaf abbootaaf kennamu
Projektii qilleensa nanno'o, fakkeennaaf mukkiin bifa adda addaa dhaabu'u)
Projektii Dargaggooni Bore Woldaa Kattaa Sherqanoo mana waaqeefannaa ijararaniif
Last Updated on Saturday, 30 January 2021 08:11